८ असोज, वीरगञ्ज । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीमाथि भएको अभद्र व्यवहारको वीरगञ्जका चिकित्सकहरुले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुले डा. केसीमाथि भएको अभद्र व्यवहारको विरोध गर्दै आज हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन् ।
लागूऔषधसहित तीन जना भारतीय पक्राउ
२५ असोज, काठङ्गाडौं । वीरगञ्जको बहुअरी चोकस्थित सडकखण्डबाट लागूऔषधसहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारतको पूर्वी चम्पारण जिल्ला मोतिहारी थाना रक्सौल ग्राम गम्हरिया पोष्ट हर्दिया-४ बस्ने २० वर्षीय बिक्रान्त पटेल, २८ …
२१ असोज, वीरगञ्ज । अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरिएको छ । चिकित्सक, अधिकारकर्मी, विभिन्न सामाजिक संघ संस्था र राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिहरुले वीरगञ्जको घण्टाघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले …
९ असोज, वीरगञ्ज । डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थमान वीरगञ्जका चिकित्सकहरुले शुक्रबार प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी अञ्चल शाखामा आवद्ध चिकित्सकहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । नारायणी अस्पताल नजिकै रहेको संघको कार्यलय अगाडि उनीहरुले …
डाक्टर केसीलाई वीरगंजका डाक्टरहरुको साथ, समर्थन गर्दै उत्रे आन्दोलनमा
वीरगंज : १९ औं सत्याहग्रह शुरु गरेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा वीरगंजका चिकित्सकहरुले समर्थन जनाउँदै आन्दोलित भएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघ वीरगंज नारायणी शाखामा आवद्ध चिकित्सकहरुले बिहीवार हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन शुरु गरेका छन्। शाखाले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाल प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहारको घोर निन्दा गर्दै उनको जायज माग सम्बोधन गर्न
२५ असार, वीरगञ्ज । आईसीयूमा उपचार गराइरहेकी युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपममा वीरगञ्जको बिर्तास्थित अली अर्थो एण्ड ट्रमा हस्पिटलमा कार्यरत तीन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ लिएको छ । वीरगञ्जकै १९ वर्षीया युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा हस्पिटलमा …
पत्रकारहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर गरे राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको रिपोर्टिङ